Forex (FX) ထရေးဒင်းဆိုတာဘာလဲ - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာForex ကျောင်းစာအုပ်Forex (FX) ထရေးဒင်းဆိုတာဘာလဲ
ငါတို့ရှိသမျှသည် Forex ၏မျှသာဖော်ပြထားခြင်းရူပတျရှုပျထှေးရရှိဘယ်မှာညစာပါတီခဲ့ကြပြီ။ လူအများစုဟာသည်အဘယ်အရာ Forex သို့မဟုတ်ပါကအလုပ်ဖြစ်တယ်နှင့်မ Forex ကုန်သည်များအစအရှိဆုံးအဘယ်သို့ရှိနေသည်ကိုမသိရပါဘူး။
သငျသညျ Forex နိုင်ငံခြားငွေကြေးအရောင်းအဝယ်ဖြစ်အကြောင်းပြောပါလျှင် (အောက်တွင် pic ကိုကြည့်ပါ) တစ်ဦးလေဆိပ်သို့မဟုတ်ဘဏ်မှာနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ရာတဲမှာငွေကြေးလဲလှယ်နှင့်အတူလုပ်ဖို့ဘာမှရှိပါတယ်လျှင်, လူအများစုတွေးမိလိမ့်မယ်။ သင်တို့သည်ဤစျေးကွက်အလုပ်လုပ်စေသည်ဘာကိုနားလည်ပြီးတာနဲ့သင်ကညစာပါတီမှာကိုယ့်ကိုကိုယ်ရှင်းပြနိုင်ပြီး, ပိုကောင်းသေး, သင်ကအောင်မြင်သောဖြစ်လာနိုင်ပါသည် ကုန်သည်.
Forex (သို့မဟုတ် FX) ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှငွေကြေးတန်ဖိုးနှင့်လဲလှယ်ကြသည်ရှိရာနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုစျေးကွက်သို့မဟုတ်ငွေကြေးစျေးကွက်တစ်ခုအတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတဦးတည်းငွေကြေးဝယ်ယူနှင့်တစ်ပြိုင်နက်ငွေပေးငွေယူ၌အခြားသောရောင်းချပါတယ်။ ငွေကြေးကုန်သွယ်အမြဲတဦးတည်းငွေကြေးအခြားရောင်းချသည်အောက်ပါသင်္ကေတအတွက်ကိုယ်စားပြုသည်အဘယ်မှာရှိအားလုံးအတွက်အတွက်ဖြစ်ပေါ်: EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာသို့မဟုတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ / JPY ။ အဆိုပါလဲလှယ်မှုနှုန်းထောက်ပံ့ရေးနှင့်ဝယ်လိုအားတို့ကဆုံးဖြတ်သည်။
အဘယ်အရာကိုအတိအကျ Forex ခုနှစ်တွင်ကုန်သွယ်ပါသလား
ဒါဟာစက္ကူစတော့ရှယ်ယာသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုန်စည်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာအအေးခဲယဉ်းငွေသားဖြစ်ပါတယ်။ ပိုများသောတိကျစွာကြောင့်မြင်သာထင်ငွေကြေးကိုယ်စားပြုကြောင်းအချက်အလက်များ၏-bits ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်သင်ဝယ်ယူသို့မဟုတ်ရောင်းချနေကြသည်တစ်ခုတည်းငွေကြေးသည်မဟုတ်, အစားသင်ကအခြားဆန့်ကျင်တဦးတည်းနိုင်ငံ၏ငွေကြေးအရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေကြသည်။ ဒါကထူးခြားတဲ့အပြန်အလှန်အားလုံးအတွက်ကုန်သွယ်ခံရငွေကြေးကိုမှု။ ဥပမာ, ယူရိုဟာဒေါ်လာဆန့်ကျင်ကုန်သွယ်ခြင်းကိုခံရနိုင်ပြီး, အရှင်သင်တဦးတည်းယူရိုတန်ဖိုးမည်မျှအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုကိုယ်စားပြုကြောင်း EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်ဦးငွေကြေးကို pair တစုံကိုဝယ်လို့ရပါတယ်။ ကမ္ဘာအနှံ့ငွေကြေးရာပေါင်းများစွာ (အရာများစွာကို tradable ရှိပါတယ်) ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့် Forex volume ၏အများစုများအတွက်အကောင့်ရာအများအပြား key ကိုငွေကြေးနှင့်အားလုံးရှိပါတယ်:
လူကြိုက်များ Pair ကို
ဒေါ်လာ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) 86.30%
ယူရို (EUR) 37% EURUSD 28%
ဂျပန်ယန်းငွေ (JPY) 16.5% USDJPY 17%
ပေါင် (ပေါင်) 15% GBPUSD 14%
ဖရန့် (CHF) 6.8% USDCHF 4%
ဒေါ်လာ (AUD) 6.7% AUSDUSD 5%
ဒေါ်လာ (CAD) 4.2% USDCAD 4%
ရင်းမြစ်: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြို့ရွာများအတွက်ဘဏ် (bis)
triennial စစ်တမ်း (www.bis.org)
ငွေကြေးရောင်းဝယ်ဖောက်ဖို့ Forex ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်သုံးအလားအလာစျေးကွက်နေသောခေါင်းစဉ်: အစက်အပြောက်စျေးကွက်, ငွေကြေးအနာဂတ်ဈေးကွက်နှင့် ငွေကြေးရှေ့ဆက်စျေးကွက်.
အဆိုပါ အစက်အပြောက်စျေးကွက် လက်ရှိလဲလှယ်မှုအတွက်အကြီးဆုံးစျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကြေးတစ်ခုသဘောတူညီခဲ့-အပေါ်သို့လဲလှယ်မှုနှုန်းမှာသူတို့ရဲ့လက်ရှိစျေးနှုန်းမှာချက်ချင်းဝယ်ရောင်းချနေကြသည်ရှိရာအစက်အပြောက် Forex စျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားဖလှယ်မှုပုံမှန်အားဖြင့်သော်လည်းကောင်းတစ်ဦးတို့က facilitated နေကြတယ် ပှဲစား သို့မဟုတ်တစ်ဘဏ်နှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလက်လီကုန်သည်များအများစုသာအစက်အပြောက်ဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းဝယ်ဖောက်လိမ့်မယ်။
ပုံမှန်အစက်အပြောက်လက်လီငွေပေးငွေယူမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်ကိုးကား, EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ၏လက်ရှိငွေလဲနှုန်းမြင်ရပါလိမ့်မည် ပှဲစား 1.4213 အဖြစ်ပလက်ဖောင်းဥပမာ, စျေးနှုန်းမေးကြည့်ပါ။ ကျနော်တို့ကခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံ, အနုတ်သေးငယ်တဲ့ပြန့်ပွားသို့မဟုတ်ကော်မရှင်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူစျေးနှုန်းကိုမေးနှင့် pips အတွက်တွက်ချက်အမြတ်သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်မိနစ်အကြာကရောင်းချသည့်ကိုးကားမှာချက်ချင်းကြောင့်စျေးကွက် $ 1000 (1 မိုက်ခရိုတွေအများကြီး) မှာဝယျပါမညျနှင့် ဒေါ်လာ။ ကျနော်တို့သာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်ထဲမှာ $ 1000 ရှိပေမယ်ကြောင့်ပုံမှန် Forex ငှါ ပှဲစား 100 ကျွန်တော်တို့ကိုပေးသည်: 1 သြဇာ, သာ $ 10 ယူနစ်အရွယ်အစားကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်ကုန်သွယ်မှုအတွက် $ 1000 အနားသတ်လိုအပ်ပါတယ်။
ထဲမှာ ငွေကြေးအနာဂတ်ဈေးကွက်, စာချုပ်များကိုဝယ်ယူနေကြသည်နှင့်အများပြည်သူကုန်စည်စျေးကွက်အပေါ်တစ်ဦးစံအရွယ်အစား (အစက်အပြောက် Forex ထက်အများကြီးပိုကြီးတဲ့) နှင့်အခြေချနေ့စွဲအပေါ်မှာအခြေခံရောင်းချခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနာဂတျမှာတစ်ဦး fixed နေ့စွဲအပေါ်တစ်ဦးပုံသေငွေလဲလှယ်နှုန်းမှာတိကျတဲ့ငွေကြေးတစ်ခုသတ်မှတ်ငွေပမာဏကိုဝယ်သို့မဟုတ်ရောင်းဖို့သဘောတူသည်။
အဆိုပါ ငွေကြေးစျေးကွက်များပေးပို့သော သူတို့ကိုအကြားခြားနားချက်နှစ်ခုပါတီများအကြားစာချုပ်၏စည်းကမ်းချက်များတစ်ခုတည်းကိုသာပါဝင်ပါတီများအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ကာအများပြည်သူကုန်စည်စျေးကွက်အပေါ်အခြေခံပြီးခံရဖို့ရှိသည်မဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူငွေကြေးအနာဂတ်စျေးကွက်ဆင်တူသည်။
အဘယ်မှာရှိပြောက် Forex ကုန်သွယ်ပါသလား
Forex တစ်ဦးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ site ကိုမရှိပါဘူး, ထိုဖြစ်ပါသည်, နယူးယောက်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်တူသောမျှကြီးမားသောအဆောက်အဦရှိ Wall Street က တစ်ခုသို့မဟုတ်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာလူတွေစည်းသို့မဟုတ်အရောင်းအလုပ်ဆောင်သွားရန်ဖို့ "သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့" ကြီးတွေသို့မဟုတ်လက် signal ကိုသို့မဟုတ်ဒေါ်လာစျေးဥပဒေကြမ်းများလည်ရှိရာချီကာဂိုအတွက်ချီကာဂိုကုန်သွယ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့။ အဲဒီအစား, Forex အီလက်ထရောနစ်လက်လီ Off-လဲလှယ်နိုင်ငံခြားငွေကြေးစျေးကွက်အတွက်ဘဏ်များနှင့်ပွဲစားတစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်ကွန်ရက်မှတဆင့်လုံးဝကို run လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ငွေကြေးစျေးကွက်အီလက်ထရောနစ်ဖြန့်ကျတ်စျေးကွက်ပြေးသောကြောင့်, ရရှိလာတဲ့အားသာချက်များရှိပါသည်။ Forex ကုန်သည်များအချိန်မရွေးအင်တာနက်ကနေတဆင့်, ဘယ်နေရာမှာမဆိုရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်။ ဒါဟာအထူးသဖြင့်အချိန်ဇုန်များတွင်တည်ရှိသောအထူးသအဆောက်အဦသို့မဟုတ်ဘဏ်များ၏နာရီအတွင်းအပေါ်အခြေခံပြီးနေ့ကိုစတင်နှင့်အဆုံးသတ်မရှိပါ။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းနှင့်ပူဇော်သက္ကာကိုနှုန်းထားများကမ္ဘာတဝှမ်းကွဲပြားခြားနားသောနေရာများနှင့်အချိန်ဇုန်များတွင်ကွဲပြားခြားနားသောဘဏ်များအစဉ်အမြဲရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစား, က 24 နာရီကုန်သွယ်, 5.5 ရက်ပေါင်းတစ်ပါတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သောကြောင့်ပလက်ဖောင်း (အဘယ်သူမျှမဖလှယ်မှုမရှိ Open-အော်ဟစ်တွင်းမရှိကြမ်းပြင်ပွဲစားများ) အခြေစိုက်င်း၏ကြီးမားသောငွေဖြစ်လွယ်ခြင်းနှင့်အင်တာနက်မြန်ဆန်-order execution နှင့် instant-ဖြည့်ပါအတည်ပြုချက်ကိုလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖြစ်ကြသည်။
အဘယ်သူသည် Forex ကုန်သွယ်မှု?
ပေါင်းစပ်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှစတော့ရှယ်ယာနှင့်အနာဂတ်စျေးကွက်ထက်ကျော် $4ထရီလီယံနေ့စဉ်ကုန်သွယ်အသံအတိုးအကျယ်နှင့်အတူ Forex ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးစျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်, အကြိမ်ပေါင်းများစွာပိုကြီး။ မကွာလွန်ခဲ့တဲ့ကြောင့်ကော်ပိုရေးရှင်းကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိငွေကြေးကိုစွန့်စားမှုကသူတို့ရဲ့ထိတွေ့ hedging သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အမြတ်အစွန်း converting, ဘဏ်များကမ္ဘာတဝှမ်းသိုက်ပေးပို့ခြင်းသည်ကျိကျိတက်ချမ်းသာကြွယ်၏သီးသန့်ဒိုမိန်းအမည်ခဲ့ဗဟိုဘဏ်ငွေကြေးမူဝါဒမှတဆင့်အမျိုးသားပြန်လည်စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များတဆင့်ပို့ခြင်းနှင့်ဒေါ်လာဘီလီယံစောင်ရန်းကိုရန်ပုံငွေများ စျေးကွက်အနေဖြင့်အဘယ်အကျိုးကိုရရန်ကြိုးစားနေ။ ဤရွေ့ကားအတူတူပင်ကြီးတွေကစားသမားနေဆဲကုန်သွယ် volume ၏အမြောက်အများပါဝင်ပေမယ့်နောက်ကျသည့်မိတ်ကပ်များနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုပြောင်းလဲပါပြီ။
အသစ်ကအင်တာနက်ကိုအခြေခံပြီးနည်းပညာများနှင့်အတူဒွန်တွဲသည့် 1990s များ၏ထိန်းချုပ်မှုလျှော့, Forex အတွက်ကြီးမားသောမှန်းဆအခွင့်အလမ်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုသေးငယ်တဲ့ကုန်သည်များအဘို့ငွေဖြစ်လွယ်၏ရေကန်ဖွဲ့စည်းရန်ပွဲစားဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ကြီးမားသောနှင့်အသေးစားကုန်သည်ကြီးများထင်ကြေးနဲ့အကျိုးအမြတ်၏ရည်ရွယ်ချက်ငွေလဲနှုန်းအတွက်သေးငယ်တဲ့အတက်အကျ၏အားသာချက်ယူနိုင်ရန်အတွက်နံပါတ်များနှင့် volume ထဲမှာကြီးထွားလာပါပြီ။
(နေ့စဉ်ကုန်သွယ် $4ထရီလီယံကျော်) အားလုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးကွက်အရှိဆုံးအရည်
နိမ့်ဆုံး slippage နှင့်အတူလက်ငင်းကုန်သွယ်မှုကွပ်မျက်
24 နာရီကုန်သွယ်, 5.5 ရက်ပေါင်းတစ်ပါတ်။ သောကြာနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှတဆင့်တနင်္ဂနွေညဦးယံအချိန်။
စျေးကွက်ပိုကြီးတဲ့သင်တန်းသားများအားဖြင့် cornered သို့မဟုတ်ကြိုးကိုင်မရနိုင်
အနိမ့်ရဲ့ margin လိုအပ်ချက်များနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သြဇာနှင့်တွေအများကြီးကုန်သွယ်
option ကို Hedging: သင်တူညီတဲ့ငွေကြေးအပေါ်ရှည်လျားတိုတောင်းသောရာထူးကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်
သူ့ဟာသူတွင်ဤအကြောင်းပြချက်၏တစ်ဦးချင်းစီကတခြားစျေးကွက်ထက် Forex ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုစေသည်များနှင့်အတူတကွပေါင်းစပ်မရှိပြိုင်ပွဲလည်းမရှိ: Forex အများကြီးနိမ့်စတင်ပမာဏနှင့်ကုန်ကျစရိတ်မှာအခြားစျေးကွက်ထက်ပိုမိုအခွင့်အလမ်းများရရှိ။ ဤရွေ့ကားအားသာချက်များကိုခေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပိုင်း၌ သာ. ကှကျကှကျကှငျးကှငျးရုပ်ပြနေကြတယ် FX စတော့ရှယ်ယာများနှင့်အနာဂတ်ကျော်အားသာချက်များ။
ဤသူအပေါင်းတို့သည်အားသာချက်များ Forex ဝေးကနေ, တစ်ဦး cakewalk ကြောင်းဆိုလိုဘူး။ အဆိုပါနေစဉ် Forex ကုန်သွယ် ပတ်ဝန်းကျင်အခြားသူတွေထက်ပိုပြီးအားသာချက်ရှိစေခြင်းငှါ, ရှိသမျှစျေးကွက်အထူးသဖြင့်အတွေ့အကြုံကုန်သည်များအဘို့, အားလုံးကုန်သည်များများအတွက်အန္တရာယ်ရှိဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, Forex မျှချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့အောင်မြင်ဖို့ထက် Forex အတွက်ဆုံးရှုံးဖို့ကပိုနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ သင်ကသို့ပြေးလမ်းခုန်ဖြစ်လျှင်, အမှန်တကယ်ငွေနှင့်လျှံသေနတ်များ, တိုတောင်းနိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးဖို့ပြင်ဆင်ထားခြင်းရှိကြလော့။ Forex ၏သချိုင်းတွေပိုပြီးအတွေ့အကြုံရှိသေူကိုက်စားအဆိုပါအတွေ့အကြုံကုန်သည်များ၏အကြွင်းအကျန်နှင့်အတူနှက်လျက်ရှိသည်။
ကျနော်တို့အသိပညာ, အကြံပေးချက်များ, နှင့်သင်ကုန်သွယ် Forex အတွက်အောင်မြင်ဖို့ကူညီပေးဖို့မဟာဗျူဟာများအားဖြင့်သင်တို့ကိုလက်နက် ပြု. သုံးစွဲဖို့ရည်ရွယ်နှင့်အတူဤပညာရေးအပိုင်းရဲ့ contents ပေးနေကြသည်။ ဒါဟာသင်လုပ်နိုင်သည်အားလုံးကိုသင်ယူနှင့်ကို virtual ငွေနှင့်သရုပ်ပြအကောင့်အသစ်များ၏၌သင်တို့၏ကုန်သွယ်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စနစ်အ hone ဖို့အချိန်ယူရန်သင့်အားတက်သည်။ သင်ပင်ထို့နောက်အစစ်အမှန်အကောင့်ကုန်သွယ်မှုပေါ်ထွက်လာနှင့်သင့်ပါတယ်သင်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သရုပ်ပြကုန်သွယ်နှင့်သင်၏အသိပညာ, ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်စနစ်ကစုံစမ်းပြီပြီးမှသာကအသေးဆုံးအများကြီးအရွယ်အစားနှင့်အတူကုန်သွယ်မှုအကြံပြုလိုတယ်။ ဒါပေမယ့်မရသူတို့၏လက်ထောက်အန္တရာယ်များမရှိ, ပိုငျသညျကျန်ရစ်သူနှင့်အမှုနဲ့၏ပိုကောင်းသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလေ့လာသင်ယူနှင့်လေ့ကျင့် - အဲဒီမှာဒီဈေးကွက်ထဲမှာရရှိနိုင်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဆုလာဘ်ဖြစ်ကြသည်။
Wall Street က
အဘယ်အရာကိုအတိအကျ Forex အတွက်ကုန်သွယ်ဖြစ်ပါတယ်
Forex Trading ဆိုတာဘာလဲ
အဘယ်မှာရှိပြောက် Forex ကုန်သွယ်ဖြစ်ပါတယ်
ကျနော်တို့သင်တို့သည်ငါတို့၏က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကိုပေးကြောင်းသေချာစေရန် cookies များကိုအသုံးပြုပါ။ သင်ဤ site ကိုသုံးစွဲဖို့ဆက်လက်ပါလျှင်ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူပျော်ရွှင်ဖြစ်ကြောင်းယူဆပါလိမ့်မယ်။